Intermix / Premix Glass Beads ho an'ny Marika Road China Manufacturer
Description:Kitapom-bolongana Premix ho an'ny fanoratana lalana,Kitapo mivalona ho an'ny lalana,Kitapo mivalona voalohany vita amin'ny glasy fanoratana
Home > Products > Intermix Glass Beads > Intermix / Premix Glass Beads ho an&#39;ny Marika Road
Ny sary hosodoko, indraindray miaraka amin'ny fanampiana toy ny perla avy amin'ny fitaratra, dia matetika ampiasaina hanamarihana ny làlana eny an-dalana. Ampiasaina ihany koa izy hanamarihana ny toerana eny amin'ny toeram-piantsonana na toerana manokana ho an'ny fiara tsy mataho-dalana, famerana faritra, na faritra tsy dia misy fiara. Ny loko ho an'ireo fampiharana ireo dia samy hafa amin'ny toerana misy azy.
Mandritra ny famokarana sary hosodoko, esory ny kofehy fitaratra amin'ny loko mifototra amin'ny tahan'ny 18-25% (lanjany isan-jato), mba hahafahan'ny loko eny an-dàlambe manohy ny fandinihana mandritra ny akanjo sy ny fahasosorana. Ny fifandraisany dia miresaka momba ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fifandraisana amin'ny People's Republic of China No. JT / T280-2004, ireo fenitra izay tsy mitovy amin'ny firenena sy faritra samihafa.
Sari-tany momba ny lozam-pifamoivoizana manasongadina fitaratra miloko glass / glass Contact Now
Kitapom-bolongana Premix ho an'ny fanoratana lalana Kitapo mivalona ho an'ny lalana Kitapo mivalona voalohany vita amin'ny glasy fanoratana Kitapom-bolongana Premix ho an'ny Roadmarking Paint Kitapom-bolan'ny Premix ho an'ny fiarovana ny arabe Kitapo mivalona ho an'ny famokarana fitaovana Kitapo mivalona mikaroka ho an'ny lalana Glass Microspheres ho an'ny fanoratana lalana